Igazi ekunqandeni - evamile yomzimba ukuvikela ukopha. Kungenjalo, ngisho kancane kubantu cut zingafa. Manje hemophilia - isifo lapho igazi kungaqali ihlule - ngempela ezingavamile, kodwa kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi azalwa naso futhi esidluliselwa ngofuzo, okusho akunakwenzeka ukuba simelane. Usongo hemophilia kwakuwukuthi umuntu zingafa kusuka ukopha zangaphakathi, engesiyo ibonakale kwabanye. Hemophilia ungaphakathi amadoda, uma sikhuluma abesifazane, ke ocansini bubuhle kaningi ngokwengeziwe abampofu igazi ekunqandeni, futhi akuyona zokugula sitholwa njengefa. It uhlala ithuba ukuphulukisa, Nokho, ezokwelapha zesimanje kuphela ukuthatha izinyathelo zawo kuqala ekwelapheni hemophilia kuphela.
Ngo isidumbu igazi lomuntu evamile ngaphandle kwesithiyo eshayela phakathi kwezinye izitsha. Ngo negabha, noma tube at draw yigazi, futhi akusho curdle. Iyini imfihlo yale impahla?
Futhi into ehlala igazi ayephuli ubudlelwano imvelo olunegazi kakhulu. Ngokuvamile, lapho umuntu isilonda unezikhinsi ukuthi kuwuphawu emzimbeni ukuthi kudingeka ukusebenzisa lo mshini igazi ekunqandeni. Ekuqaleni, eduze indawo lesion lwakha thrombus eyinhloko - okuxekethile ngokubukeka. Uma silandela inqubo ngesibonakhulu, ungabona, kokubili lesion uwela zingu fibrin, izinhlayiya zegazi kukhona ukubambezeleka. Lona ngumphumela umsebenzi ngokuxhamazela kohlelo endocrine, okuhlangabezana ngowokuqala kwi "ezizimele" Esimweni esinjalo. Ngokuqhubekayo, leli ihlule legazi nezinguquko ezithile zamakhemikhali babe ayazika. Thrombus kwakhiwa kusayithi isilonda ingenye ipulaki evimbela ukugeleza kwegazi kusukela isitsha ethintekile. Ngokukhamba kwesikhathi, ngaphasi kwakheka ungqimba olusha kwezicubu, wayesefakwa exfoliated.
Ngokuvamile, ukuze yakha ihlule eyinhloko, anele kwesigamu somzuzu - kulokhu igazi eyeka egeleza kakhulu, kodwa unga vypityvatsya kusukela ngaphansi kwakhe kuphela.
Viscous, igazi obukhulu, okuyinto coagulates kahle futhi uketshezi lapho coagulates ezimbi - ngokulinganayo inkinga umzimba. Uma igazi emaningi, kungabangela amahlule nezitsha impumuzo. Uma kuwukuthi ketshezi, isikhathi ukopha kungase isikhathi eside.
Ngaphambi kokuba ahlinzwe, odokotela ukwenza coagulation - ukunquma igazi ekunqandeni. Uma kuyinto evamile, yenza lula kakhulu inqubo wokusebenza. Uma kuwukuthi okunamathelayo, noma okuphambene nalokho - ketshezi, lo preoperative ukunikeza amalungiselelo akhethekile ekunqandeni zokulungisa. Ukuvivinywa Kokungathathi igazi ekunqandeni kuqakathekile kakhulu ngesikhathi sokubeletha, njengoba kwaba njalo endabeni ka-esiphuthumayo, odokotela kufanele lilungele igazi. Ngaphambili, lapho izinqubo igazi angakafakwa uphenyo, abanye abesifazane washona ebeletha kusuka ukopha. Ezibhedlela zesimanje izimo ezinjalo kukhona nkomoni, ngakho okwesabekayo kokuphila kukamama kanye nengane ngeke kukusize ngalutho kuso.
Bamba iqhaza ukuhlaziywa nemingcele ezinjalo coagulation:
isikhathi ngesikhathi eyathatha wopha - evamile ngalesi sikhathi amaminithi amahlanu. Kukholakala ukuthi kamuva imizuzu emihlanu nomzimba womuntu enempilo, ukopha kufanele ayeke.
isikhathi lapho engasasebenzi, igazi ihlule - ngokuvamile emva kwemizuzu emihlanu kuya eziyisikhombisa ngemuva kokuqala opha ihlule friable kumele akha ephelele igazi ihlule evikela imithambo yegazi liphindele igazi.
prothrombin kulesi sikhathi emzimbeni ukuze isebenze (imizuzwana amabili) - isikhathi prothrombin.
Igazi ekunqandeni - inqubo angaqondakaliyo ibilokhu wafunda eminyaka. Ekugcineni, wafunda, okuvumela ukuba usebenzise idatha ekwelapheni izifo igazi ethwele usongo ibalulekile abantu. Futhi ngeke kodwa jabulani.
Izindawo Brown esikhumbeni: yini okufanele uyenze?
Sezombangazwe Viktor Vladimirovich Medvedchuk: Biography futhi amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Ukubulawa Charles 1 (30 Januwari 1649) e-London. The Second Civil War eNgilandi
Burgers Juicy kusukela kwesibindi: iresiphi
Sebenza uxhumano gas womzalwane: ukuklanywa igesi ukunikezela ukufakwa imishini igesi
"Trankvezipam": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Le ndiza nephupho, kuyosho ukuthini?